3 emahara kunyorera kutanga vhiki netariro | IPhone nhau
3 emahara maapplication ekutanga vhiki aine tarisiro
Vhiki idzva rinotanga uye kuti riite kuti zvinyanye kukuomera kutanga kubva kuActualidad iPhone yatinounza mitambo mitatu yemahara nemaapp Nguva Yakatemwa.
Rangarira izvo zvinopihwa zvine zuva rekupera. Tinogona chete kuvimbisa kushanda kwayo panguva yekutsikisa ichi chinyorwa asi kwete mushure. Naizvozvo, kuraira kwedu ndekwekuti uzvitorere nekukurumidza sezvazvinogona kuitira kuti ugone kubatsirwa kubva pamitero. Handei ikoko!
1 Inzwi Rinoita: Izwi kune Zvinyorwa
2 Zoom sahwira
3 Mutambo weBridge
Inzwi Rinoita: Izwi kune Zvinyorwa
Isu tinotanga neichi chinhu chikuru chine zita rinototiudza zvese. Kutenda «Inzwi Inoshanda» unogona kumira kutaipa pabhodhi uye shandisa izwi rako kutumira mameseji paTeregiramu, WhatsApp, maemail, raira maNotes uye zvimwe zvakawanda. Uye zvakare, ine rutsigiro rwemitauro makumi matatu nemaviri, inobvumidza iwe kuteedzera zvinyorwa nekungodzvanya pombi imwechete uye inosanganisira otomatiki kururamisa
"Inzwi Inoshanda: Kubva kuIzwi kuenda Kumavara" ine mutengo wenguva dzose we € 10,99, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose. Usarase uyu mukana!
Inzwi rinoshanda!10,99 €
Yechipiri yeemahara kunyorera kwanhasi Muvhuro i "Zoom Recorder", vhidhiyo application yauchakwanisa kusvitsa kusvika pa16x kuburitsa mukati nekunze kwemufananidzo munguva chaiyo uchinyora vhidhiyo mu FULL HD mhando pa1080p.
Icho chiri nyore uye chiri nyore-kushandisa-kushandisa, inowirirana nezvose zviri zviviri iPhone nePadad, mune portrait kana mamiriro emamiriro, uye iyo inopa inopinza chifananidzo nekutenda kune otomatiki tarisa tekinoroji. Uye mavhidhiyo acho anochengetwa zvakananga muApp photos pane yako iPhone, senguva dzose.
"Zoom Recorder" ine mutengo wenguva dzose we € 1,09, zvisinei ikozvino unogona kuiwana mahara zvachose. Usarase uyu mukana!
Zoom sahwira1,09 €
Uye isu tinopedzisa ne "Iyo Bridge Game", mutambo mauri kuti uchave unovaka bhiriji. Kuburikidza nemakumi mana emazinga ekutambudzika iwe uchafanirwa kuvaka mabhiriji pamusoro penzizi, migwagwa, mipata uye nezvimwe, kusarudza zvinhu zvakafanira uye nehunyanzvi hwekuona kuti mabhiriji ako anokwanisa kumira mumugwagwa wezuva nezuva.
"Iyo Bridge Game" ine mutengo wenguva dzose we € 1,09, zvisinei ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara. Usarase uyu mukana!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 3 emahara maapplication ekutanga vhiki aine tarisiro
izwi rinoshanda? asi iOs keyboard haichadaro izvo
izwi rinoshanda? asi izvo hazvitoite iyo keyboard yeIOs?
Hongu. Chaizvoizvo iri iyo Dictation sarudzo zvisinei, kugona kweimwe uye imwe ichave yakasiyana. Yese, kana iri yemahara iwe unogona kuyedza uye zvinokushamisa iwe. Uye kana zvisiri, zvidzime uye uenderere mberi neIOS Dictation
Iyo Bridge Game haishande ne ios11
Zvakanaka, ngatione kana iye anovandudza ari kuisa mabhatiri. Zvikasadaro zvinongorega kuvapo kana zvikasashanda paIOS 11
Vhoriyamu yeiyo iPhone 8 uye iPhone 7 vakatarisana, yakagadziridzwa here?